Kokuhlupheka yokwanda kwethuba lokuba kwenzeke esindizayo izindiza commercial exosha abantu abaningi ngokwengeziwe ukuba ezizimele jet efuze. amasiko Long imigqa, amasheke nokulondeka TSA, zezindiza ophithizelayo, kukhona nje ezinye ngokuphumelelayo ezindizayo phezu Jets commercial. Abantu ejwayele fly ekilasini lokuqala noma ibhizinisi class basuke manje ngokuya ebuka sezomnotho yangasese jet efuze. Nokho, ngokungafani izindiza kwezohwebo, yayo akulula ukuthola izindleko ziqashisa indiza. Ngakho lapha thina siphendule umbuzo: kubiza malini ukuze charter indiza yangasese?
Izindleko ziqashisa indiza sikhishwa zamaRandi hora ngezindiza ngalinye. Njengoba kulindeleke, izindleko uyahluka onobuhle ezahlukene ndiza. Ezinye izindiza zikanokusho, kanti abanye akuzona ukuthi zikanokusho. Ezinye izindiza isikhala engaphezu kweshumi abagibeli, kanti ezincane abe ambalwa amane izihlalo nomgibeli kuphela.
Omunye owesincane charter izindiza ezimakethe iyona Cessna Ukulandisa Mustang, ekwazi ukuhlalisa abantu abangu mayelana 4-5 abagibeli. Iphinde kwenzeka ukuba kube indiza eshibhe charter: unga charter a Cessna Ukulandisa Mustang iminyaka engaba $1700 ihora ngalinye ezindizayo.
Nakuba ngandlela-thile kunenani Ukulandisa Mustang iyona Learjet 60, ekwazi ukuhlalisa abantu abangu up to 8 abagibeli. Made by Bombardier Aerospace e Wichita, Kansas kungadla nawe mayelana $3400 Ihora zindiza charter the Learjet ngayinye 60.
Ekupheleni ephakeme indiza like Gulfstream 550, okuyinto kubiza cishe $8600 ihora kwesikhathi ezindizayo ngalinye. Kuyasiza kancane ukuthi ekwazi ukuhlalisa abantu abangu mayelana 14-19 abagibeli.